မယုံနိုင်လောက်အောင် post ခေါင်းစဉ်များနှင့်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရေးသားဖို့ဘယ်လိုသိကောင်းစရာများ
ခေါင်းစဉ်များ၊ စာမူခေါင်းစဉ်များ၊ ခေါင်းစဉ်များ၊ ခေါင်းစဉ်များ…သင်ခေါ်ချင်သည်ဖြစ်စေ၎င်းတို့သည်သင်ပို့လွှတ်သည့်အကြောင်းအရာတိုင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲ ဒီ Quicksprout infographic အရသိရသည်နေစဉ် ၈၀% သောလူတွေကဖတ်တယ် သာခေါင်းစဉ် ပရိသတ် ၂၀% ဟာတကယ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ ခေါင်းစဉ် tags များအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြသည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization သင်၏အကြောင်းအရာများကိုရရှိရန်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် လူမှုမီဒီယာအပေါ်မျှဝေခဲ့သည်.
အခုသင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိပြီဆိုရင်၊ ကောင်းတဲ့အရာကိုဘာလုပ်သလဲ၊ ဘယ်လိုရေးရမလဲလို့စဉ်းစားမိမှာပါ။ ကောင်းပြီ၊ Quicksprout ကဖန်တီးလိုက်သောကြောင့်ယနေ့သည်သင်၏ကံကောင်းခြင်းနေ့ဖြစ်၏ သင်ရုံသင်ပေးလိမ့်မည်ဟု infographic.
နာမဝိသေသနများ၊ ကိန်းဂဏန်းများနှင့်အလုံးစုံပုံသေနည်းကိုအသုံးပြုခြင်း နံပါတ်သို့မဟုတ်အစပျိုးစကားလုံး + နာမဝိသေသန + Keyword + ကတိ ပြီးပြည့်စုံသောခေါင်းစဉ်နှင့်ညီသည်။ Neil သည်ယနေ့ခေတ်တွင်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးလေ့ရှိသောကြောင့်တိုတောင်း။ ချိုမြိန်သောခေါင်းစဉ်များကိုဖော်ပြထားသည်။
ခေါင်းစဉ်အပြည့်အစုံကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးထားတုန်းကစာဖတ်သူနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ရှည်လျားပြီးတိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်တုန့်ပြန်မှုနှုန်းတွေရရှိခဲ့တဲ့ဆိုဒ်များစွာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ငါတိုတိုနှင့်ရှည်လျားသောနှစ် ဦး စလုံးစမ်းသပ်ဖို့မကြောက်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုခေါင်းစီးများပေါ်ရှိခေါင်းစဉ် tag ကိုသင်ချိန်ညှိရုံသာလိုပေမည် ၊၊ သင်ရှာဖွေရန်အင်ဂျင်များကသင်အလွန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည့်ခေါင်းစဉ်ကိုမဖြတ်ပစ်နိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးအကြံပေးချက်ကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်ပါ။ ခေါင်းစဉ်များမကြာခဏပျက်ကွက်သောကြောင့်၊ သူတို့သည်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးနှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ၎င်းတို့သည်တိကျသောစကားလုံးမဟုတ်ပါ၊ အပိုထပ်ဆောင်းအကူအညီလိုပြီးပျော်စရာလိုသလား။ ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ Portent မှပါဝင်သည့် Idea Generator အတ္တ၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်၊ သတင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းစသည့်နည်းဗျူဟာများမှတဆင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိသောခေါင်းစဉ်များအပါအ ၀ င်သင့်ခေါင်းစဉ်များအတွက်ချိတ်ဆက်မှုအချို့ကိုအကြံပြုထားသည်, နှင့်ဟာသ။
Tags: တိုက်ခိုက်Baker စျေးကွက်အကြောင်းအရာစိတ်ကူးမီးစက်မာတိကာဆန့်ကျင်ကော်ဖီပဲ့တင်သံလုပ်ငန်းရှင်များ - ခရီးမြန်မာသံရုံးခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ရေးသားနည်းခေါင်းစဉ်ဘယ်လိုရေးရမလဲဟာသclick-through နှုန်းကိုတိုးမြှင့်SERP CTR တိုးမြှင့်ပန်းချီဆရာMarketingLandmozneil patelသတင်းအကောင်းဆုံးခေါင်းစဉ်များအထင်ကြီးစရာကောင်းတယ်ရာထူးquicksproutအရင်းအမြစ်စနေနေ့ခေါင်းစဉ်များအတွက်အကြံပေးချက်များခေါင်းစဉ်များအတွက်အကြံပေးချက်များခေါင်းစဉ်
Kroger Chefbot - ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် Bot နည်းပညာဖြင့်တန်ဖိုးကိုပေးရာတွင်အလွန်အသုံးဝင်သည်
သြဂုတ် 25, 2014 မှာ 10: 07 AM